Iyo watchOS 6.1 beta inoita kunge inovandudza kuzvimiririra kweiyo Series 5 | Ndinobva mac
Iyo watchOS 6.1 beta inoita kunge inovandudza kuzvimiririra kweiyo Series 5
Zvakawanda zvinotaurwa pamusoro pekudyiwa kukuru kwebhatiri uko vashandisi veApple Watch Series 5 vari kutambura uye kunyangwe chiri chokwadi kwete vese vashandisi vari kucherechedza kushandiswa kwakanyanya uku, zvinoita sekunge kune vashoma vashandisi vanogunun'una. Zvine musoro, iyo vhezheni yewatchOS 6.0.1 inoita kunge isiri kuvandudza iyi yakakura bhatiri kushandiswa zvakanyanya asi iyo vhezheni irimo mubeta mumaoko evanogadzira inoita, vhezheni 6.1 yeiyo system.
Haisi chinhu chinokanganisa vese vashandisi veiyo nyowani Series 5
Uye ndeyekuti yakakwira bhatiri yekushandisa hachisi chinhu chiri kubata chaicho vese vashandisi veiyo nyowani yeApple Watch Series 5. Mazuva mashoma apfuura mune podcast ye #todoapple takabvunza varidzi vekutanga uye vane rombo rakanaka remidziyo iyi uye mhinduro dzaive dzakasiyana . Nhau dzakaipa dzinogara dzichibuda online, isu hatiwanzo kuwana yakanaka nhau nezvekushanda kwechigadzirwa kana isu tatanga kutarisa, asi ichokwadi icho kune zvichemo mune izvi nekuzvimiririra kweiyo wachi.
Izvo zviri kutaurwa ndezvekuti iyo-inogara iri-skrini inogona kunge iri iyo honzeri huru uye ikozvino Apple iri kutoshanda kugadzirisa dambudziko neshanduro nyowani dze software. Mune ino kesi watchOS 6.1 ichave iri mumutsetse wekuvandudza kuzvitonga yemawachi matsva uye pamwe nekufamba kwemazuva, vhiki nemwedzi sezvakakurukurwa mukati 9to5mac. Kuzvimiririra uku kunofanirwa kusvika pakukwirira kunoratidzwa neApple pane yayo webhusaiti kuti ingangoita maawa gumi nemasere, tinoenda zuva rese. Izvo zvinoita sezviri pachena ndezvekuti mhinduro dziri kushandirwa uye dambudziko iri rinogona kugadziriswa panguva dzinotevera shanduro dze software.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo watchOS 6.1 beta inoita kunge inovandudza kuzvimiririra kweiyo Series 5
Maitiro ekuisa macOS Catalina kubva pakutanga
MacOS Catalina inosanganisa iro rekutonga izwi rinogumira pakukwana